Izindaba - Ungaqinisekisa kanjani ukusebenza kokuphepha kwe-Tower crane
Ngomhla ziyisi-9 kuMbasa, 2022, ingozi yokuwa yenzeke ngesikhathi kumiswa u-crane wombhoshongo endaweni yokwakha, futhi abalimele abaziwa.
Ukufingqa izimbangela zokuwa kwe-tower crane emhlabeni wonke, kunezici ezi-3 ezinkulu:
1. Ukufakwa nokuhlakazwa kombhoshongo we-crane;
3.Indaba yekhwalithi ye-tower crane.Ukusebenza Kokuphepha kuwumthwalo wawo wonke umuntu, ukwephulwa okukhulu kwemithethonqubo kanye nemisebenzi yokulayisha ngokweqile.
Iphuzu elibalulekile lokugwema ingozi ukuvimbela.
Ngesixazululo Esiphelele se-tower crane: Idivayisi yokuphepha + Uhlelo lwekhamera ye-Hook + Uhlelo lokuqapha eliphansi lenza umsebenzi wokwakha umbhoshongo we-tower crane uphephe.Abashayeli nabaphathi bangahlola isimo sokuphepha se-tower cranes ngesikhathi sangempela ukuze bagweme izingozi zokuphepha ezingaba khona.
Umbhoshongo craneLayisha inkomba yesikhathikanye nohlelo lokulwa nokushayisana inganikeza ukuqapha kwesikhathi sangempela sokusebenza kombhoshongo we-crane, hlola izinkomba zokuphepha zokusebenza kombhoshongo we-crane, okuhlanganisa isisindo, umzuzu wokulayisha, i-trolley, ukuphakama, i-sleiwng, isivinini somoya, ukuklama, ukulwa nokushayisana nomsindo nesixwayiso sokukhanya kanye ne-alamu lapho usondela. umkhawulo obekiwe, ungafinyelela i-tower crane Ukusika okuzenzakalelayo kwemisebenzi eyingozi: Lapho izimo eziyingozi ezinjengokulayisha ngokweqile kwenzeka, uhlelo lokuphepha lwe-tower crane lunganqamula ngokuzenzakalelayo ukuziphatha okuyingozi, ukuze i-tower crane izoba ngasendleleni yokusebenza okuphephile. futhi ivimbele ukusebenza okuyingozi.
Tower crane hookikhamerauhlelo : Uhlelo lokuqondisa lungabonisa izithombe zevidiyo zesikhathi sangempela eduze kwehhuku kumshayeli we-crane yombhoshongo ngezithombe ezinencazelo ephezulu, ukuze umshayeli akwazi ukwenza imisebenzi efanele kanye nokwahlulela ngokushesha nangokunembile, futhi axazulule izinkinga ezifana nezindawo ezingaboni kahle zokubona, ukufiphala. umbono emabangeni amade omshayeli we-tower crane endaweni yokwakha.Ingagwema ngempumelelo ukwenzeka kwezingozi, futhi iyithuluzi elibalulekile lokuthuthukisa ukusebenza kahle kokwakhiwa kwesizinda sokwakha, ukunciphisa izinga lezingozi zokuphepha kanye nezindleko zabasebenzi, futhi kukhuthaze indawo yokwakha evamile yedijithali.
Faka ikhamera yehuku, ibhethri, kanye nabakaki bokushaja okungenantambo ku-tower crane trolley.Ikhamera izogxila ngokuzenzekelayo futhi ilandelele ihuku, ukuze ibonise isithombe sokusebenza kwesikhathi sangempela sehhuku ngokwebanga elikhuphukayo nelihlayo lokuphakama okuphakeme ngokudluliswa kwevidiyo okungenantambo kumshayeli we-tower crane.Esikrinini sokusebenza, umshayeli we-tower crane uqapha i-hoisting range ngaphandle kweziphetho ezifile, ehlisa izingozi ezibangelwa ama- blind hoists.
Uhlelo lokuqapha phansi: Okukhethekile ukuze urekhode futhi ubuke idatha yawo wonke ama-crane ane-RC-A11-II kukhompyutha yesayithi.Ukuqapha ngesikhathi sangempela ukwakheka kwe-Tower crane, indawo kanye nokunyakaza kukhompyutha yesayithi.
Uhlelo lusekela ukuphequlula kwedatha okungenantambo.Abasebenzisi badinga kuphela ukufaka isofthiwe yokuqapha ehambisanayo ku-PC yokuphatha indawo futhi baxhume i-antenna yokuxhumana ngesikhathi sangempela ukuqapha ulwazi lwesimo se-crane yombhoshongo ngamunye, kuhlanganise nobude besikhathi sangempela se-crane tower, esebenzayo. irediyasi, ikhwalithi yomthwalo, i-engeli yokubulala, isivinini somoya esisendaweni kanye nolwazi oluphikisana nokushayisana.Ngaphezu kwalokho, umphathi angakwazi futhi ukuguqula futhi alayishe idatha yesayithi kanye ne-tower crane ngokusebenzisa isofthiwe yokuqapha.Lapho i-tower crane idinga ukweqa izithiyo ngenkani noma ukungena ezindaweni eziyingozi, ingagunyaza ukude ukuze ibone ukuthi lokhu kusebenza kuvunyelwe yini.
Indlunkulu: CHENGDU RECEN TECHNOLOGY CO.,LTD
Igatsha lase-Malaysia: IZIHLOKO ZEMISHINI YAkamuva ye-SDN BHD
Faka: Block 3 Paris International, 288 CHECHENG West Second Road, LongQuanYi District, Chengdu City, Sichuan Province, China
Isikhathi sokuthumela: Apr-15-2022
I-Mobile Crane Nvq, Layisha Isikhathi Inkomba, I-Mobile Crane Qatar, Layisha Isikhathi, I-Anti Collision System ye-Tower Crane, I-Tower Crane Load Moment Inkomba,